Ihe 5 nke Ahịa Ahịa Na-aga nke Ọma | Martech Zone
Monday, April 2, 2012 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya, anyị na ndị ahịa anyị gosipụtara, TinderBox, na Ihe 5 nke Achọpụta Ahịa Na-aga nke Ọma. Ihe ngosi dị mfe ma azịza ya dị egwu. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, dị nnọọ ka atụmatụ ndị ọzọ niile anyị na-ahụ… ike ide nnukwu echiche ahịa na-enyere aka ịgbanwe atụmanya ndị ọzọ n'ime ndị ahịa. Mgbe ole DK New Media nke mbụ malitere, anyị nọrọ ụbọchị ole na ole na-ede amụma ndị dị na peeji iri abụọ, iri atọ na iri anọ. Anyị ahịa amụma na-now ahaziri, nkenke, na ruo n'ókè.
Aha ya bụ Louise Woodbury
Ngosipụta dị ukwuu. Daalụ Douglas maka ịga n'ihu na-enyere anyị aka ịgbanwe echiche anyị maka otu onye ahịa 'ọhụrụ' si eche.
Daalụ nke ukwuu maka ụdị okwu ahụ, @ twitter-237502821: disqus!
Mee 7, 2012 na 5: 16 PM
Ya egwu na-eme ka obere onye ọchụnta ego mara banyere ahịa na otu ị nwere ike isi kpọsaa ngwaahịa gị na ogo na ịdị mfe.